F-i60T လက်ဗွေတူရိယာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ parameters တွေကို CPU ကို: 400MHz မှတ်ဉာဏ်: 32M / 64M / 128M လျှပ်တစ်ပြက်မီး Operating system ကို: Linux ကို Algorithm ဗားရှင်း: ကြည့်ရှုခြင်း 10.934အဓိကနည်းပညာ Display ကို: TFT 2.4inch လက်ဗွေဖော်ထုတ်ခြင်းမြန်နှုန်း: 0.5အသိအမှတ်ပြုမြန်နှုန်း့: Misjudgment မှုနှုန်း≤0.6s: နှုန်း≤0.0001% ငြင်းဆန်: ≤0.01% လက်ဗွေစွမ်းရည်: 3000/10000/30000/50000 စံချိန်စွမ်းရည်: 80000/100000 ဆက်သွယ်ရေး: TCP / IP, RS485, USB ကပါဝါထောက်ပံ့ရေး: DC က 5V ကို standby လက်ရှိ: 220MA အလုပ်အဖွဲ့ကလက်ရှိ: 300MA အသံ prompt ကို: အသံ …
နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များကို ID ကိုကဒ်စွမ်းဆောင်ရည်: 30,000 ငွေသွင်းငွေထုတ်စွမ်းဆောင်ရည်: 50,000 ဆက်သွယ်ရေး: TCP / IP, RS232 / 485, USB မှတ်-Host က Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Interface ကိုများအတွက်: EM သော့ခတ်, တံခါးကိုအာရုံခံကိရိယာ, ထွက်ပေါက်ခလုတ်ကို, နှိုးသံ, တံခါးကိုဘဲလ် Wiegand Signal: output&input နျ Standard Functions များ: anti-passback, webserver,9ဒစ်ဂျစ်တယ်အရေအတွက်ကမလုပ်မဖြစ် Functions များ: Mifare, HID ပြရန်: N / A ပါဝါထောက်ပံ့ရေး: 12V ကို DC က Operating အပူချိန်: 0℃ ~ + 45 ℃ Operating စို: 20%-80%RH အအရွယ်အစား: 153× 95,5 × 35.5mm စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 0.8ကီလိုဂရမ်
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များဆက်သွယ်ရေး protocol ကို: က ISO / IEC14443 TypeA ပံ့ပိုးမှုကဒ်: MF S50 / S70 နှင့်အခြား chip ကိုကတ်များ, ထောက်ခံမှု CPU ကိုကဒ် (ကဏ္ဍအကြောင်းအရာဖတ်နေအထောက်အကူ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ: DC က 12V (± 5%) အလုပ်လုပ်လက်ရှိ: 55MA Output Format ကို: Wiegand 26 သို့မဟုတ် Wiegand 34 (စီမံခန့်ခွဲမှုကဒ်နှင့်အတူ output ကို format ကိုပြောင်းလဲစေ) induction အကွာအဝေး: 30အချိန်ဖတ်နေ ~ 100mm Card ကို: <200ms ဂီယာအကွာအဝေး: 100 အပူချိန်အလုပ်လုပ်မီတာ: -10℃ ~ + 60 ℃အလုပ်အဖွဲ့စိုထိုင်းဆ: …
လက်ကိုင်ထောက်လှမ်း Module SD က-UD01M လက်ကိုင်ထောက်လှမ်း module တစ်ခု RFID လက်ကိုင်ထောက်လှမ်း module တစ်ခုအပြည့်အဝအကွာအဝေးဖြစ်ပါသည်. အသုံးပြုသူရဲ့ system ကိုသို့ပေါင်းစည်းမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်, မတူညီသောမော်ဒယ်များနှင့်အညီသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ tag ကိုအမျိုးမျိုးမှဖတ်ရနိုင်. လက်ကိုင်ထောက်လှမ်း module တစ်ခုစက်မှုဇုန်-တန်းကို ABS အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်ချမှတ်, ပြင်းထန်မှုတုန်ခါမှု၏တုန်ခါမှုမှခုခံ, RS232, Wiegand format နဲ့ output ကို signal ကို. အလယ်တန်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတ kit များကို. ကုန်ပစ္စည်း …
ပင်မနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ parameters တွေကိုကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး: 902~ 928MHz, 865~ 868MHz (ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများသို့မဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးများအညီချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်) Air ကို interface ကို protocol ကို: ထောက်ခံမှု ISO18000-6B, ISO18000-6C, EPC Class1 Gen2 အလုပ်အဖွဲ့ mode ကို: တက်ကြွ mode ကို, command ကို mode ကို, ခလုတ် mode ကို RF output ကို: 0-33 dBm ချိန်ညှိပါဝါထောက်ပံ့ရေး: DC12V, 3တစ်ဦးက (220V AC ပါဝါ Adapter ကို supporting) ပါဝါစားသုံးမှု: ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပါဝါ <20ဆက်သွယ်ရေးအင်တာဖေ့စ W က: RS232, RS485, TCP / IP, Wiegand 26/34 channel …
နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကိုစာဖတ်ခြင်းနည်းလမ်း: 125kHz EM4102 tags များလက်ဗွေ Reader ကို: optic Baud မှုနှုန်း: 115200Bps ပြရန်: TFT1.8′ 128× 160 high-definition image ကိုခင်းကျင်းပြသလက်ဗွေစွမ်းရည်: 225 အပိုင်းပိုင်း Event: 500 အပိုင်းပိုင်းသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်: 80,000 အပိုင်းပိုင်းသက်ရောက်မှုစံချိန်စွမ်းရည်: 32,000 အပိုင်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး: USB မှတ်တော့ Pogo pin ကိုအဆက်အသွယ်ပါဝါစားသုံးမှု: 10,000 ကြိမ်စကင်ကို tag ကိုစစ်ဆင်ရေးရရှိနိုင် Direction အဖွဲ့: LED + တုန်ခါမှု + LCD ကိုဘက်ထရီ: 1,000mAh ဘက်ထရီ built-in အားပြန်သွင်းနိုင်လီသီယမ်ဘက်ထရီဘက်ထရီအဆင့်:5အဆင့်ဆင့် …
အလုပ်လုပ်အကြိမ်ရေ: 13.56MHz နျ Standard protocol ကို: က ISO / IEC15693 နှင့် ISO18000-3 လေးစားလိုက်နာခြင်းကဒ်: NXP ငါ CODE2, TI, ST Input အားဗို့: AC အ 100-240V အလုပ်အဖွဲ့ကလက်ရှိ: < 5တစ်ဦးက RF ပါဝါ: < 1-8W က (သင့်အောင်လုပ်နိုင်သော) အလုပ်လုပ် mode ကို: host က mode ကို / scan mode ကို / channel mode ကိုဆက်သွယ်ရေးအင်တာဖေ့စ: RS232 / RS485 / Wiegand interface နဲ့ TCP / IP (optional ကို) GPIO: အရွယ်မှာ Infrared sensing: အနီအောက်ရောင်ခြည်အများဆုံးဆက်သွယ်ရေး baud rate ကိုသုံးစုံ: 38400 bps ကဒ်များ …
hardware feature များ: Store ကို 600,000 Display ကိုစူပါ-ခိုင်မာတဲ့လေကြောင်းလူမီနီယံဖွဲ့စည်းပုံ LED စစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်းများ, မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာခက်ခဲဓာတ်တိုးကုသမှု, အခမဲ့ကျဆုံးခြင်း4ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆော့ဝဲအားသာချက်များမရှိဘဲမီတာ: 1, သငျသညျ ACCESS သို့မဟုတ် SQL database ကိုသုံးစွဲဖို့ရှေးခယျြနိုငျ, သင် SQL database ကိုရွေးချယ်ပါက, ထောက်ခံမှုဒေတာခွဲဝေမှုစုံလင်နိုင်ပါတယ်, ဒေတာဝေမျှဖို့အဆင်ပြေမျိုးစုံကွန်ပျူတာများ. 2, ဆော့ဖျဝဲ interface ကိုရိုးရှင်းတဲ့, အသုံးပြုခြင်း …
အလုပ်လုပ်ဗို့: DC က 8 ~ 15V ပါဝါစားသုံးမှု: <1W ကဒေတာများကိုချွေတာရေး: >10 နှစ်ပေါင်း (ပါဝါပျက်ကွက်ပြီးနောက်) စုစုပေါင်းဖမ်းယူရေး: 25000 အပိုင်းပိုင်း (သင့်အောင်လုပ်နိုင်သော) Card ကိုထိန်းချုပ်မှု: 2500 အပိုင်းပိုင်း (သင့်အောင်လုပ်နိုင်သော) LCD ကို resolution ကို: 122× 32 Dots Build-in ကိုစကားလုံးအခြေစိုက်စခန်း: 1616 အမျိုးသားရေးလူတန်းစားနှစ်ခုကိုဇာတ်ကောင်အခြေစိုက်စခန်း×. ဆက်သွယ်ရေး mode ကို: တဦးတည်း RS485 Wiegand 26 port ကို: နှစျခု Relay output ကို: နှစ်ဦးကိုနိုင်ငံတော် input ကို: လေးကတ်စာဖတ်ခြင်းအမျိုးအစား: EM သဟဇာတသို့မဟုတ် Mifare သဟဇာတ induction …
NFC ကိုဖိုရမ် Tag ကို NDEF format နဲ့ပက်ကေ့
NFC ကိုဖိုရမ်အမျိုးအစား 1 tag ကို, 1 အမျိုးအစား,3PCs အဖြူကဒ် (NfcA) NFC ကိုဖိုရမ်အမျိုးအစား2tag ကို,4အမျိုးအစား,12PCs အဖြူကဒ် (NfcA) NFC ကိုဖိုရမ်အမျိုးအစား3tag ကို, 1 အမျိုးအစား,3PCs အဖြူကဒ် (NfcF) NFC ကိုဖိုရမ်အမျိုးအစား4tag ကို,3အမျိုးအစား,9PCs အဖြူကဒ် (IsoDep) NFC ကိုဖိုရမ်အမျိုးအစား5tag ကို 1 အမျိုးအစား,2PCs အဖြူကဒ် (NfcV, ISO15693) NFC ကိုအမျိုးအစား Mifare Tag ကို,2အမျိုးအစား,6PCs အဖြူကဒ် (NfcA) …
interface ကို USB: 1.0/2.0 အပြည့်အဝမြန်နှုန်း cryptographic algorithm: DES ဟာ / 3DES Flash ကိုမှတ်ဉာဏ်: ဦး disk ကို + ဖလက်ရှ (128/256M က)/ cos chip ကို (8-16K သည်) စံ: T က =0လုံခြုံရေး features တွေကို: ထောက်ခံမှု PIN ကိုစိစစ်အတည်ပြု, ပြင်ပစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း, ပြည်တွင်းရေး authentication ကို Plug ကြိမ်: 20000 ကြိမ် (USB အရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ယုံကြည်စိတ်ချရပေါ် မူတည်.) အဆင့်အတန်းကိုညွှန်ပြ: နှစ်ဆအရောင် LED, ညွှန်ကြားချက်ပါဝါသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးအဆင့်အတန်း, Operating အပူချိန်ဉသြသံသုံးစွဲသူထိန်းချုပ်ရေး: -20℃ ~ + 60 ℃ Dimension: 60(L ကို)x က 18(W က)x က 8(H ကို) …